Adihevitra : nifampiampanga momba ny 2009 i Lylison sy Andriamandavy Rina | NewsMada
Adihevitra : nifampiampanga momba ny 2009 i Lylison sy Andriamandavy Rina
Nofohazina indray. Nifandahatra tamin’ny fandaharan’ny fahitalvitra iray, omaly, ny loholona isany, Lylison René sy Andriamandavy Riana. Nifampitsikera ny « Raharahan’ny 2009 » izy ireo, niainga amin’ilay fametrahana ny fehezam-boninkazo ny 29 marsa teo.
Nahitsy ny fanehoan-kevitry ny loholona Andriamandavy Rina, nampahatsiahy fa tsy afa-bela tamin’iny krizy iny ny loholona Lylison. « Efa nahazatra ny senatera ny tahaka ireny, toy ny fanonganam-panjakana ka tiana haverina indray. Raha hanontaniana ny vahoaka, matahotra ny hiverenan’izany. Miparitaka ny basy noho ireny fanonganam-panjakana ireny sy ny namakianareo ny tobin’ny Capsat ka mitondra ny tsy filaminana sy ny tsy fandriampahalemana. Tompon’antoka amin’ny famoretana vahoaka tamin’ny lakrimozena ny 2009 ianareo », hoy izy.
Nandrehitra afo, nandoro ny tanàna
Nitondra valin-kafatra ny senatera Lylison ka nilaza fa tompon’antoka tamin’ny 2009 koa ity loholona voafidy tany Fianarantsoa ity. « Tsy Emmo/Reg aho tamin’izany ka aleo hanontaniana ny tompon’andraikitra tamin’izany. Tsy nisy fahazoan-dalana avokoa ireny hetsika rehetra ireny. Momba ny Capsat, any anontaniana ny momba izany… Filohan’ny tanora Tim ianao ary anisan’ny nandrehitra afo, nandoro ny tanàna teto… », hoy izy.
Ankoatra ireo, mbola nifandroritana ny 29 marsa farany teo. Nohitsin’ny loholona Lylison fa nisy baiko avy any ambony tao ambadik’iny fanakantsakanana azy iny. « Efa nivonona ny hametraka voninkazo aorian’ny manampahefana izahay… Niandry ny filoham-pirenena ho tonga izahay ka diso ny filazana fa hametraka mialohany izahay. Homeko tsiny koa ny prefet satria raha nisy tsy azoazony izany filazana tamin’ny haino aman-jery izany, efa tokony ho nilaza mialoha izy. Niakatra am- pilaminana izahay nandeha teny... », hoy izy.
Hanana ny hambarany ny filohan’ny Antenimierandoholona
Ho an’ny loholona Andriamandavy Riana kosa, efa fihantsiana sahady ny fanentanana tamin’ny haino aman-jery. « Efa fikasana fidinana an-dalambe sy fitarihana vahoaka ireny. Teo koa ny fifamaliana amin’ny Jly Rakotomahanina Florens nefa efa nanazava fa tsy nahazo alalana hitondra vahoaka hidina an-dalambe ary voararan’ny lalàna ny hetsika politika. Efa nampiseho tsy fankatoavana sahady izy teo… Niantso vahoaka sy nanentana olona ho eny amin’ny Mausolée… Toe-tsaina tsy tan-dalàna izany ary tsy vao voalohany ny nanaovanao izany. Efa fantatra ny fiketrehana ny tsy hahatanteraka ny Frankofonia. Ho hitantsika eo raha mbola hitarika olona an-dalambe ianao. Ho voaporofo izao resantsika izao. Tokony ho voasazy ianao raha ny tena izy noho ny fanonganam-panjakana nataonao… », hoy izy.
Ampahany ihany amin’ny fifandaharan’ny roa tonta ireo…. Mety hanan-kambara ny filohan’ny Antenimierandoholona, anio etsy Anosikely, momba azy mirahalahy ireo.